I-Oppo Reno 5G yi-smartphone yokuqala ye-5G yaseYurophu ekhoyo | I-Androidsis
Namhlanje, u-Sekela Yongameli we-Oppo u-Shen Yiren ubhengeze nge-Weibo ukuba iphehlelelwe kutshanje Ushicilelo lwe-Oppo Reno 5G kuye kwaba I-smartphone yokuqala ye-5G efumanekayo eYurophu.
U-Oppo, ongomnye wamaqabane eSwitzerlandcom wokuqala we-5G, wakhokela kwi Ukuqaliswa kwe-Oppo Reno 5G ye-smartphone eZurich, eSwitzerland. Ndiyabulela koku, inkampani yaseTshayina ikwazile ukuba yeyokuqala ukumilisela ngokusesikweni i-5G ye-smartphone kwintengiso yaseYurophu.
Kwintengiso yaseTshayina, umenzi ukwabhengeze ukusekwa kwe "iZiko lamava le5G" kunye neChina Unicom. Kwibala lokuvavanywa kwesantya senethiwekhi se-5G, ukusebenza kwe-smartphone kunamandla, Ukufikelela kwisantya esiphezulu sokukhuphela ngaphezulu kwe-1.5GB / s kunye nokuzinza kwisantya sokukhuphela malunga ne-1.4GB / s.
I-Reno 5G isekwe kwimodeli yeflegi Oppo Reno 10X Zoom Edition. Ngokumalunga nexabiso, i-Oppo Reno 5G inexabiso eliphakame kancinci kunezinye iimodeli kuthotho lweReno, zibiza i-900 euros. Iya kufumaneka ukuze ithengwe ukusukela kule nyanga.
I-smartphone inayo Isibonisi se-AMOLED esingama-6.6-intshi, evelisa isisombululo se-FullHD + sama-pixels angama-2,340 x 1,080 kunye nomlinganiselo we-19.5: 9. Inika umyinge we-93.1% wesikrini ukuya kumzimba kwaye isikrini sikhuselwe yiCorning yeGorilla Glass 6.
Imodyuli ye-shark fin ibandakanya ikhamera ye-selfie ye-megapixel eyi-16 kunye nesibane se-LED. Ifowuni iza ixhotywe kukuseta ikhamera kathathu, ebandakanya i-OIS enikwe amandla i-megapixel engama-586 ye-Sony IMX48 sensor ene-f / 1.7 aperture, 13-megapixel periscope telephoto lens with 5x zoom zoom, and 8-megapixel wide-angle lens, which is assist by OIS and features a aperture f / 2.2.
Okokugqibela, iqonga leselula Qualcomm Snapdragon 855 Igunya le-smartphone, isixhobo sibonisa ibhetri ye-4,065 mAh exhasa i-VOOC 3.0 yokutshaja ngokukhawuleza kwaye iza ixhotyiswe ngetekhnoloji yokupholisa ulwelo lwePC.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Oppo Reno 5G yi-smartphone yokuqala ye-5G yaseYurophu ekhoyo